महिलालाई उपचारमा छुट दिँदै हरियो चुरा प्याकेज – Sulsule
सुलसुले २०७७ भदौ २ गते १०:४९ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस फैलिएर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल आउनसमेत मानिस हिच्किचाइरहेका बेला भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित डा. इवामुरा मेमोरियल अस्पतालले भने तीजलाई लक्ष्य गरी महिलाका लागि हरियो चुरा प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ ।
महिलाको स्वास्थ्योपचारलाई लक्ष्य गरी निःशुल्क एवं ५० प्रतिशत छुटमा स्त्रीरोग विशेषज्ञद्वारा स्वास्थ्य सेवा दिने गरी प्याकेज ल्याइएको अस्पतालका निर्देशक जीवन मारिखुले जानकारी दिए ।
अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. शोभा मारिखु श्रेष्ठले यी सेवा तीजका अवसरमा यही भदौ १० गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । यो सेवामा २०० महिलाले सेवा लिएका छन् । अस्पतालको १०० महिलालाई हरियो चुरा प्याकेजमा सहभागी गराउने लक्ष्य रहेको निर्देशक मारिखुले जानकारी दिए ।